LALAM-PIRENENA FAHA-25 : Kafe 5 taonina sy Rafia 400kg tsy ara-dalàna saron’ny zandary
Ho fanamafisan’ireo mpitandro filaminana ny fitsirihana atao ireo fiara mivezivezy eny amin’ny lalam-pirenena dia mitohy hatrany ny fisafoana. 13 août 2019
Ankoatra ny fahatrarana ireo olona mpitondra rongony nisesisesy tato ho ato dia fantatra tamin’ny loharanom-baovao voaray ihany koa fa ny 07 aogositra lasa teo dia saron’ny zandary avy ao amin’ny vondron-tobim-paritra avy ao Mananjary , teny amin’ny lalam-pirenena faha 25 iny ny kafe milanja dimy taonina tsy misy taratasy ara-dalàna noentina fiara anankiray.
Ankoatra io kafe io dia nahatrarana rafia milanja 400kg izay mbola tsy nisy taratasy ara-dalàna ihany koa ny fiara iray hafa nandalo, tokony ho tamin’ny folo ora alina tany ho any. Nomarihin’ireo mpanao fanadihadiana hatrany fa tsy ara-dalàna ilay rafia satria dia efa ao anatin’ny fikatonan’ny fikirakirana izany ny ao an-toerana amin’izao fotoana izao. Vokany, nogiazana ilay kafe niampy ireo fiara miisa telo nitondra izany, ilay rafia kosa naterina teny amin’ny CIREEF na ny (Circonsription Régionale de l’Environnement, des Eaux et Forets).
Mampitandrina hatrany ireo mpampiasa lalana ny eo anivon’ny mpitandro filaminana misahana ny fifamoivoizana ary nanantitratintra hatrany fa ho hentitra amin’ny fanaraha-maso akaiky ireo mpivezivezy.